Noocyada kalluunka biyaha qabow | Kalluunka
Noocyada kalluunka biyaha qabow
ka kalluunka biyaha qabow waxaa lagu hayaa quraaradda quraaradda iyada oo aan loo baahnayn ku dar kululeeyaha. Waa kuwa ku nool heerkulka qolka. Taasi waa sababta ay ugu habboon yihiin kuwa doonaya inay ka bilaabaan arimahan iyaga oo aan khabiir ku ahayn.
Waxaa jira noocyo badan oo kalluun biyo aad u qabow ah. astaan ​​u noqoshada casaankas laakiin kani wuxuu leeyahay dhowr doorsoomayaal. In kasta oo aan inta badan helno laba nooc. Kalluunka Dahabka ah (kalluunka casaanka liinta ah) ama kaarboonka iyo Carpakoi.
Goldfish: Waa kalluunka ugu caansan ee casaanka casaanka ah, iyagu waa kuwa caadiga ah ee aan ku aragno haanta kalluunka ee wareegsan, maahan deegaankeedii ugu fiicnaa maxaa yeelay si wanaagsan ayey ugu kori doontaa quraaradda quraaradda. Aad uma xulan cuntada, laakiin iyagu si joogto ah ayey wax u cunaan sidaa darteed waa inaad aad uga taxaddartaa dhirta dabiiciga ah, maadaama ay cuni karto iyaga.
Carpakoi: Aad bay u adkeysi badan yihiin waxayna sidoo kale leeyihiin a midabo kala duwan taas oo ka dhigaysa iyaga xitaa kuwo la yaab leh, waxay gaari karaan dhererkooda 50 cm, sidaa darteed waa inaan tixgelinnaa dhererka quraaradda. Daryeelkooduna waa mid aasaasi ah.
Shiinaha Neon: Xaqiiqdii waad garaneysaa iyaga maxaa yeelay waa kalluunkaas yaryar ee aan ku aragno dukaamada aad u ifaya oo aad u soo jiidasho badan, joogitaankooduna waa raaxo muuqaal ah. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay inaad haysato iyaga koox 7 ah.
Pink Barbel: Kalluunka noocan ah wuxuu iska caabiyaa kala duwanaanta heerkulka, sidaa darteed way fududahay in la ilaaliyo. Iyagu waa casaan daran oo leh codad cagaar ah iyo dhibco madow oo ku yaal baalashooda, waa muunad aad u cajaa'ib badan oo nolosha ku siinaysa quraaradda.
Telescopic: Kalluunka noocan ah waxaa inta badan lagu gartaa sida uu u weyn yahay indhaha oo bullanaya oo ka soo baxa madaxa, jirka oo gaaban oo wareegsan. Noocyadan dhexdooda waxaad ka heli kartaa kala duwanaansho kala duwan. Way fududahay in la daryeelo oo si fiican ula qabsado wada noolaanshaha.
Betta splendens: Waa kalluun kale oo aad u qurux badan, oo yeelanaya baalashooda dhaadheer iyo waliba isku darka midabbo kala duwan. Dhibaatada ugu weyn ee jirta ayaa ah inay tahay mid aad u dagaal badan isla markaana ay adkeyneyso la noolaanshaha kalluunka kale.
Loach Dojo y Xaragada Iyagu waa laba kalluun oo aan dagaal ku jirin inta kale ee ku nool aquarium-ka oo aad u adkaysi badan, haa, waxay ku tartamaan cuntada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Noocyada kalluunka biyaha qabow
Xagee la dhigaa aquarium-ka
Kalluunka catfish ama 'nadiifiyeyaasha barkadda'